आजको तस्वीर : जँड्याहा पनि मानव सेवा आश्रममा ! – ebaglung.com
आजको तस्वीर : जँड्याहा पनि मानव सेवा आश्रममा !
२०७५ बैशाख १४, शुक्रबार १०:४८	Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ २०७५ बैशाख १४ । बागलुङ नगरपालिकाका सडकहरुमा केहि समय पहिले सम्म देखिने अनाथ बालबालिकाहरुको व्यवस्थापन गरिएपछी त्यो नमिठो दृश्य देख्न पाईन छोडेको छ । तर पछिल्ला दिनहरुमा रक्सी पिएर फिटान परेकाहरु भने देखिने गर्छन । यसरी मापसे गर्नेहरुलाई उचित कार्बाही तथा व्यवस्थापन गर्ने काम भने भएको देखिदैन । सम्वन्धित घर परिवार, बागलुङ नगरपालिका, सामाजिक संघसंस्था तथा प्रहरी समेतको नजरमा नपरेका यी जँड्याहाहरु सडकमै धूत परेको देखिन्छ ।
जँड्याहाहरुलाई उद्धार गर्ने थलो मानवसेवा आश्रम नभएपनि आज शुक्रवार विहान एक जना मापसे गरेका दाजुलाई देखेर मन थाम्न नसकेकी मानवसेवा आश्रममा सेवारत बहिनीले निजलाई मानव सेवा आश्रममा ल्याएर उद्धार गरेकी छन् । ती बहिनीको यस कार्यले निश्चयपनि सरोकारवालाहरुलाई सचेत गराएको हुनुपर्छ ।
ती बहिनीले आफ्नो फेसबुक पानामा लेखेकी छन् ‘हुन त जाँड रक्सी खानेलाई आश्रममा लेराउने त हैन तर एउटा मानव भएको नाताले आफ्नै अगाडि कसैको मृत्यु भएको नि टुलु टुलु हेर्न सकिएन तेसैले जति दिन बाचे पनि सेवा गर्ने हेतुले दाईलाई लेएर आईयो ।’
बागलुङ नगरपालिका, प्रशासन, प्रहरी तथा सम्वन्धित सामाजिक संघ संस्थाको नजरमा बहिनीले लेखेको यी हरफ पर्लान् ?
गजल : … देशको चित्र देखेर !